The Best Social Justice Feature Award – Yangon Journalism School
The Best Social Justice Feature Award
ငရဲခန်းသို့ စာချုပ်ချုပ်၍ လိုက်မိခြင်း
7 Day News, Vol. 17, No. 40
ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်တစ်စောင်က ဖော်ထုတ်ရန်ခက်ခဲသော ရှုပ်ထွေးပွေလီနေသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးများ လူကုန်ကူးခံရမှုပုံစံသစ်တစ်ခုဆီသို့ တွန်းပို့နေပါသည်။
‘နိုင်ငံခြားသားများနှင့် မြန်မာအမျိုးသမီးများ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းကိစ္စ’ ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ယင်းညွှန်ကြားချက်သည် မြန်မာအမျိုးသမီးများ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကိစ္စနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နိုင်ငံခြားသားတို့ပြုလုပ်သည့် ထိမ်းမြားမင်္ဂလာကျမ်းကျိန်လွှာကို ခရိုင်တရားရုံး၊ ခရိုင်တရားသူကြီးကသာ ပြုလုပ်ပေးရမည်ဟုပါရှိသော ညွှန်ကြားချက်ကို သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်တွင် ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်က လက်မှတ် ရေးထိုးကာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၉ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
နှစ်ကာအချို့ကြာလာသည့် အခါတွင်တော့ အထက်ပါညွှန်ကြားချက်ပါ အချက်အလက်များမှ လစ်ဟာချက်အချို့ကို အသုံးချကာ မြန်မာအမျိုးသမီးများကို ပစ်မှတ်ထားသော လူကုန်ကူးမှုပုံစံသစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာသည်ဟု လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်း ရေး ရဲတပ်ဖွဲ့က အခိုင်အမာပြောသည်။ အဓိကဖြေရှင်းနေရသည့် ပြဿနာမှာ တရုတ်နိုင်ငံသားက ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် ကျမ်းကျိန်ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအမျိုးသမီးကို တရားရုံးတွင် လက်ထပ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသည့်အ ခါ ကျွန်တစ်ဦးသဖွယ် အတင်း အဓမ္မခိုင်းစေခြင်း၊ အဓမ္မလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် အခြားသူများထံ ထပ်မံရောင်းစားခြင်းတို့ ပြုလုပ် ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
သတို့သမီးလိုအပ်ချက် မြင့်မားနေသော တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်ချင်း ထိစပ်နေသည့် ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှ မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသူများကို နည်းမျိုး စုံဖြင့် တောင်းယူလက်ထပ်သွား ပြီး လူကုန်ကူးခံရသည့် ဖြစ်ရပ် များက လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ရှိခဲ့သည်။ ဝမ်းရေးအတွက် ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်မြို့ အချို့၌ ရုန်းကန်နေသော အရွယ် ကောင်းမိန်းမပျိုများကို ပွဲစားက ရှာဖွေချိတ်ဆက်ကာ ငွေကြေး မက်လုံးပေး၍ တရုတ်မယားအ ဖြစ် အသုံးချသည့် လူကုန်ကူးခြင်း ကလည်း ခေတ်ကောင်းခဲ့သလို တားဆီးရန် ယနေ့အချိန်ထိခက်ခဲ နေသည်။ လူကုန်ကူး ပွဲစားများ နှင့် သတို့သမီးရှာနေသောတရုတ် အမျိုးသားများ နောက်ဆုံးထုတ် သုံးလာသည့် နည်းဗျူဟာမှာ အစိုးရက တရားဝင် ခွင့်ပြုထား သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုး သမီးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံခြား သား လက်ထပ်ကျမ်းကျိန်ခွင့် ပေးထားခြင်းအပေါ် အခွင့်အရေးယူကာ လူကုန်ကူးခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ နောက်ပိုင်း စတင်ကြုံတွေ့ လာသည့် အဆိုပါခေတ်သစ်လူ ကုန်ကူးသည့် ပုံစံသစ်၏ စိန်ခေါ် မှုကြောင့် လူကုန်ကူးမှုတားဆီး နှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ခေါင်းခဲနေ ကြသည်။
‘‘ဒီ Issue ကို လျှော့တွက်ထားကြတယ်’’ လူကုန်ကူးခံရသည့်ပုံစံမျိုး စုံအနက် တရုတ်မယားဘဝ ရောက်ပြီးနောက် မွေးရပ်ဇာတိ နှင့် မိုင်ပေါင်းထောင်ချီသော ရေ ခြားမြေခြားတွင် ပြဿနာမျိုးစုံ ကြုံတွေ့နေသည့် မြန်မာအမျိုး သမီးများ၏ ဒုက္ခများကို အလျင် အမြန်ဖြေရှင်းပေးရေးသည် အ ရေးကြီးနေပြီး တာဝန်ရှိသူများနှင့် မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ယခင်ထက် အာရုံစိုက်သင့်ပြီဖြစ် ကြောင်း လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ် နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ ဒုတိယတပ်ဖွဲ့ မှူးရဲမှူးကြီးသက်နောင်က သတိပေးသည်။
ခရိုင်တရားသူကြီးကို လုပ်ပိုင် ခွင့်အပ်နှင်းထားသော ညွှန်ကြားချက်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာအမျိုး သမီးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံခြား သားတို့ပြုလုပ်သည့် ထိမ်းမြား မင်္ဂလာကျမ်းကျိန်လွှာကို ခရိုင်တ ရားရုံး၊ ခရိုင်တရားသူကြီးကပြု လုပ်ပေးရမည်ဟူသော အချက် အပါအဝင် နိုင်ငံခြားသားများနှင့် မြန်မာအမျိုးသမီးများ ထိမ်းမြား လက်ထပ်ခြင်း ကိစ္စဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အချက် ၁၂ ချက်ပါ ညွှန်ကြားချက်တစ်စောင်ကို ပြည် ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် က လက်မှတ်ထိုးကာ ၂၀၁၂ မေလ ၉ ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားသားနှင့်မြန်မာအမျိုးသ မီးများ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခွင့် သည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်ရှေ့နှစ်များက တည်းကရှိခဲ့သော်လည်း ယင်း အပေါ် အခွင့်ကောင်းယူကာ လူ ကုန်ကူးသည့်ပြဿနာအများအ ပြားရှိလာ၍ ၁၉၉၈ ဇူလိုင် ၁ ရက် တွင် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ကာတား မြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
ညွှန်ကြားချက်နောက်ကွယ် မှ ပြဿနာသည် အလွန်ကြီးမားခဲ့ ပြီး သတင်းအမှောင်ကျခဲ့သော စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် ယင်း ဖြစ်ရပ်သည် လူမသိသူမသိ တိမ် မြုပ်ခဲ့သည်။ ပြည်ပတွင် အလုပ် လုပ်လိုသော မြန်မာအမျိုးသမီး များက ယင်းညွှန်ကြားချက်၏ယို ပေါက်ကို ရှာဖွေကာနိုင်ငံခြား သားနှင့် ဟန်ဆောင်လက်ထပ် ခြင်းအပြင် နိုင်ငံကူး လက်မှတ် အတု၊ စာရွက်စာတမ်းအတုများ ပြုလုပ်၍ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ နည်း မျိုးစုံဖြင့် ထွက်ခွာကြရာ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က ရှောင်တခင် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အဂတိလိုက်စား သောဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအချို့ ကို စစ်ဆေးအရေးယူခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မြန်မာနိုင်ငံ သားအမျိုးသမီးတစ်ဦးအား နိုင်ငံ ခြားသားတစ်ဦးနှင့် ထိမ်းမြား လက်ထပ်ကြောင်း ကျမ်းကျိန်လွှာ ပြုလုပ်ရေးတင်ပြလာပါက မည် သည့်တရားရုံးကမျှ လက်ခံ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရန်လည်း ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နောင် ၁၅ နှစ်အကြာ သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက်တွင် ဆွေးနွေးအဖြေ ရှာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်မြန်မာအမျိုးသမီးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်နိုင်ငံခြားသားလက်ထပ် ကျမ်းကျိန်လွှာကို ခရိုင်တရားရုံး၊ ခရိုင်တရားသူကြီးကသာပြုလုပ် ပေးရမည်ဟူသော ညွှန်ကြားချက် ဖြင့် ပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့ပြန်သည်။ ခွင့်ပြုရသည့် အကြောင်းရင်းက ရှင်းသည်။ တရားရုံးများက မြန် မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတစ်ဦး နှင့် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးကို ထိမ်း မြားလက်ထပ်ရန် ကျမ်းကျိန်လွှာ ပြုလုပ်ပေးခြင်းမရှိသဖြင့် အမှန် တကယ်ထိမ်းမြားလက်ထပ်လိုသူ နိုင်ငံခြားသားနှင့် မြန်မာအမျိုးသ မီးတို့အတွက် အခက်အခဲများဖြစ် ပေါ်၍ မြန်မာအမျိုးသမီးများရ သင့်ရထိုက်သည့် အခွင့်အရေး များ နစ်နာဆုံးရှုံးနေသဖြင့် စနစ် တကျလက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးရန် ညွှန်ကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီး နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နိုင်ငံခြားသား တို့လက်ထပ်ထိမ်းမြား၍ ကျမ်း ကျိန်လွှာပြုလုပ်လိုသူတို့သည် ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်များဟုတ်၊ မဟုတ် ခရိုင်တရားသူကြီးက စိစစ်ရန် အပါအဝင် အချက်ငါးချက်ကို ညွှန်ကြားထားသည်။ မြန်မာ့ဓ လေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာအရ တရားရုံး၌လက် ထပ်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားသားသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်ဖြစ်နေရန် လိုအပ်ပြီးဟုတ်မှန် မှသာ ခရိုင်တရားရုံး၌ လက်ထပ် ကျမ်းကျိန်ခွင့်ပြုထားသည်။ သို့ သော် တရုတ်နိုင်ငံသား အပါအဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာမိန်း ကလေးနှင့် လက်ထပ်လိုသော နိုင်ငံခြားသားများသည် ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်အဖြစ် ခပ်လွယ်လွယ် ကျမ်းကျိန်၍ရနေပြီး ယင်းအချက် ကို အဓိကအသုံးချကာ တရားရုံး ၌လက်ထပ်ပြီး လူကုန်ကူမှုကျူး လွန်မှုများရှိနေသည်။
‘‘သင်ထားပေးသလောက် လေး နာမည်ခေါ်တတ်ရုံနဲ့သူတို့ နှစ်ယောက်အကြင်လင်မယားအ ဖြစ်သင့်၊မသင့် စဉ်းစားသင့်တာ ပေါ့။ ကိုယ့်နိုင်ငံသူ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ သားတစ်ယောက် တခြားနိုင်ငံ သားနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်မယ်ဆို ရင် ဒီထက်ပြည့်စုံတဲ့စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်လိုတယ်’’ ဟု ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ညွှန်ကြားချက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း အ ငြိမ်းစားဒုတိယရဲမှူးကြီး ဦးညွှန့် လှိုင် (လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ် နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့) ကအကြံပြု သည်။
‘‘တရုတ်နိုင်ငံကနေလာပြီး ကျွန်တော်လူပျိုပါ၊ ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာပါ၊ ကျွန်တော်အိမ် ထောင်မရှိပါဘူးဆိုတာကြီးက ဘယ်လိုများ ပြောရမလဲ’’ ဟု ခရိုင်တရားသူကြီး ရှေ့မှောက် တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ခပ် လွယ်လွယ် ကျမ်းကျိန်နေကြ သည့် အခြေအနေကို လူကုန်ကူး မှုတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူးခင်မောင်ကြွယ်က မေးခွန်း ထုတ်သည်။
မြန်မာအမျိုးသမီးနှင့် လက် ထပ်လိုသော နိုင်ငံခြားသားသည် မည့်သည့်ဘာသာဝင်ဖြစ်စေ၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်အဖြစ် တရားသူကြီး ကိုသက်သေပြရန် မိနစ်ပိုင်းအ တွင်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင် သည်။ တရားရုံးများအနီးလမ်း ဘေးတွင် ပေါများစွာရှိနေသော နိုတြီဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် တိုင်ပင်လိုက်ရုံဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်ဖြစ်စေသည့် လမ်းကြောင်း ပေါ်ရောက်သွားပြီဖြစ်သည်။
7Day ဂျာနယ်က နိုတြီ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုကို စုံ စမ်းမေးမြန်းခဲ့ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီးနှင့် လက်ထပ် လိုသော နိုင်ငံခြားသားသည် မည် သည့်ဘာသာဝင်ဖြစ်စေဗုဒ္ဓဘာ သာကိုးကွယ်သည်ဟု သက်သေ ပြရန် ဘုရားရှိခိုးနေပုံ၊ ဘုန်း ကြီးဆွမ်းကပ်နေပုံများကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်၍ ယင်းဓာတ်ပုံကို တရားရုံး သို့ သက်သေအဖြစ်တင်ပြကာ လက်ထပ်ကျမ်းကျိန်သည်ဟု ပြောကြသည်။
‘‘သူတို့ဘာသာသူတို့ကြိုက် တဲ့ဘာသာကိုးကွယ်။ ဒါသူတို့ ကဏ္ဍပဲ။ အဓိကက ဒီမှာကျမ်း ကျိန်ဖို့ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ထွက်ဆို တာ’’ ဟု နိုတြီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် နေသူတစ်ဦးကပြောသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်ဘဲ လိမ်ညာပြီးကျမ်းကျိန်ကြသူများ လည်းရှိသည်ဟုဆိုသည်။ တရား ရုံးအတွင်း ခရိုင်တရားသူကြီးရှေ့ တွင် ကျမ်းကျိန်ရသည့် အခြေအ နေကို နိုတြီလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်နေပြီးကိုယ်တိုင်က သက် သေနေရာတွင် လက်မှတ်ထိုးပေး နေသူတစ်ဦးက အောက်ပါအ တိုင်းပုံဖော်ရှင်းပြသည်။
‘‘မေးတယ်။ သူ့ (နိုင်ငံခြား သား) မေးတယ်။ ဘာကိုးကွယ် လဲ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆို ပြီးပြီ။ ဘာမှဆက်မေးစရာမရှိ တော့ဘူး။ သူ့လည်းတော်တန်ရုံ မမေးဘူး။ မမေးဘူးဆိုတာက သူ လည်း မြန်မာစကားနားလည်တာ မဟုတ်ဘူး။ သိပ်ရစ်တာပြုတာ မရှိဘူး’’
နိုင်ငံခြားသားနှင့်လက်ထပ် သည့် မြန်မာအမျိုးသမီးများအ တွက် လုံလောက်သော အကာအ ကွယ်ပေးမှုမရှိဟု ယုံကြည်သော ကြောင့် လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာ ကွယ်ရေး ဗဟိုအဖွဲ့တွင် ပါဝင် သော တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေ ဖြင့် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း ဒုတိယရဲမှူး ကြီး ညွန့်လှိုင် (ငြိမ်း) က အကြံပြု သည်။
‘‘စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် တွေရဲ့ အားနည်းချက်ကြောင့် တရုတ်အမျိုးသားတွေဟာ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေကို အလွယ်တကူ လက်ထပ်ခွင့်ရပြီးတော့ ဇနီး မယားအဖြစ်ခေါ်သွားမယ်။ ဟို ရောက်တဲ့အခါ လူကုန်ကူးမခံရပါ ဘူးလို့ ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်ဘူး’’ ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
ဒုတိယရဲမှူးကြီး ညွန့်လှိုင် (ငြိမ်း) သည် လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် ၁၀ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး လတ်တလောတွင် လူကုန်ကူးခံရ သူများအရေး ကူညီဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအမျိုး သမီးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံခြား သားတို့ ပြုလုပ်သည့် လက်ထပ် ကျမ်းကျိန်လွှာကို ခရိုင်တရားရုံး များတွင်ပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားထား ပြီး သက်ဆိုင်ရာခရိုင်တရားရုံးမှ ခရိုင်တရားသူကြီးသည် လက် ထပ်လိုသူနှစ်ဦးက တင်ပြချက် များကို စိစစ်၍ ကျေနပ်သောအ ခြေအနေမဟုတ်ပါက ငြင်းပယ် ခွင့်ရှိနေသည်။ တရားရုံးအချို့ သည် အသေးစိတ်စိစစ်ရန် အား နည်းချက်ရှိပြီး နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာအချို့ ရှိခဲ့သည်ဟု လူ ကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာက ဖြစ်ခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံသားက မြန်မာအမျိုး သမီးတစ်ဦးကို တရားရုံးတွင် လက်ထပ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု၌ ကာယကံရှင်မိန်းကလေး၏ အိမ်ထောင်စု စာရင်းမှ မွေးသက္ကရာဇ်ကို အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်၍ လိမ်လည်လက်မှတ်ထိုးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လူကုန်ကူးမှုတားဆီး နှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုတိယ ရဲမှူးဝေလွင်ကပြောကြားသည်။ ကာယကံရှင်အမျိုးသမီး၏ မိဘများအား ငွေပေးပြီး တရားရုံး တွင် တရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့သော် လည်း တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဒုက္ခကြုံ နေချိန် ပြန်လည်ကယ်တင်ခဲ့ရ သည်။ ထို့နောက် စစ်ဆေးရာ အိမ်ထောင်စုစာရင်းမှ မွေးသက္က ရာဇ်ကို ဘောပင်ဖြင့် ပြင်ဆင်၍ လိမ်လည် လက်မှတ်ထိုးသွား သည်ကို စစ်ဆေးတွ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်ဟု ကိုယ်တိုင်တရားလိုလုပ် ၍ အမှုဖွင့်ထားသော ဒုတိယရဲမှူး ဝေလွင်က ပြောသည်။ အဆိုပါအ မှုကို ယနေ့အချိန်ထိ စစ်ဆေး နေဆဲဖြစ်သည်။
တရားသူကြီး အနေဖြင့် လက်ထပ်ကျမ်းကျိန်သူနှစ်ဦးက တင်ပြသော အချက်အလက်များ အပေါ် သင်္ကာမကင်းပါက ဌာန ဆိုင်ရာမှတစ်ဆင့် အတည်ပြုစိ စစ်ပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်ဟု ဥပဒေပညာရှင် ဦးကျော်ဇေယျက ပြောသည်။
ကျမ်းကျိန်လွှာပြုလုပ်လိုသူတို့ သည် အမှန်တကယ်အကြင်လင် မယားအဖြစ် နှစ်ဦးသဘောတူ ပေါင်းသင်းရန် ရည်ရွယ်၍ ထိမ်း မြားလက်ထပ်လိုခြင်း ဟုတ်၊ မဟုတ် ခိုင်လုံသည့်အထောက် အထားတင်ပြနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိ။ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်များဟုတ်၊ မဟုတ်။ ထိမ်းမြားလက်ထပ်နိုင်သည့်အ ရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသူတို့ ဟုတ်၊မဟုတ်။ ကျမ်းကျိန်လွှာ တွင် ဖော်ပြချက်များသည် မှန် ကန်ခြင်းရှိ၊ မရှိနှင့်လိမ်လည်အလွဲ ပြောဆိုခြင်း၊ ဖြားယောင်းသွေး ဆောင်ခြင်း၊ မိမိတို့သဘော ဆန္ဒအလျောက်လွတ်လပ်စွာသ ဘောတူကျမ်းကျိန်လွှာပြုလုပ် ခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ်ကို လက်ထပ် မည့် ကာယကံရှင်နှစ်ဦး ရှေ့ မှောက်ရှိခရိုင်တရားသူကြီးက စိ စစ်ပြီးအချက်အလက်ပြည့်စုံပါ က သက်သေများ ရှေ့မှောက် တွင် ကျမ်းကျိန်ဆိုစေ၍ ကျမ်း ကျိန်လွှာတွင် ဖော်ပြပါရှိသောအ ချက်အလက်များမှန်ကန်ကြောင်း ကတိဝန်ခံချက်လက်မှတ်ရေးထိုး စေသည်။
‘‘သင်္ကာမကင်းဖြစ်နေရင် ငြင်းပယ်နိုင်တယ်။ အချက်အ လက်တွေက မှန်ကန်ရမယ်။ တိ ကျရမယ်။ စစ်ဆေးပေးဖို့လည်း သက်ဆိုင်ရာကို တောင်းဆိုနိုင် တယ်’’ ဟု ဦးကျော်ဇေယျက ပြောသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာအမျိုး သမီးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံခြား သားလက်ထပ်ထိမ်းမြားမည်ဆို ပါက ကာယကံရှင်နှစ်ဦးသည် အစိုးရက တရားဝင်ခန့်အပ်ထား သော နိုတြီပက်ဘလစ် (Notary Public)ရှေ့နေများထံတွင် လို အပ်သောစာရွက်စာတမ်းများပြု လုပ်ရသည်။ နိုတြီပက်ဘလစ်ရှေ့ နေများနှင့် တိုက်ရိုက်မတွေ့ဆုံဘဲ နိုတြီလုပ်ရန်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ များထံတွင်လည်း သတ်မှတ်ဝန် ဆောင်ခပေးကာ အပ်နှံ၍ စာ ရွက်စာတမ်းများပြုလုပ်ကြသည်။ ရန်ကုန်မြို့ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်ရှိ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း နှင့် ဘဏ်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိ နိုတြီလုပ်ငန်းလုပ်နေသူအချို့ကို မေးမြန်းရာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာ အမျိုးသမီးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နိုင်ငံခြားသားလက်ထပ်ထိမ်းမြား မည်ဆိုပါက ဝန်ဆောင်ခဈေးနှုန်း အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ တရုတ်အမျိုးသားနှင့် ဆိုပါက ကျပ်ခုနစ်သိန်းခန့်ကုန်ကျ ပြီး တရားသူကြီးကိုရော နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူအ ချို့ကိုပါ ငွေပေးရသည်ဟု နိုတြီ လုပ်သူက ပြောသည်။ တရားရုံး တွင် ကျမ်းကျိန်ပေးသော တရား သူကြီးနှင့်လက်မှတ်ထိုးပေးမည့် တရားသူကြီးအပြင် အနည်းဆုံး လေးဦးကို ငွေပေးရသည်ဟုပြော သည်။ အချို့တရားသူကြီးများ က တိတိကျကျစစ်ဆေးကြသည် ဟု ပြောသည်။
တရားဝင်လက်ထပ်ရာတွင် တရားသူကြီးရှေ့မှောက်၌ သက် သေပြရမည့်အချက်များအနက် အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် ကျမ်းကျိန် သက်သေပြရန်မှာ အလွန်လွယ် ကူလွန်းနေသည်။
‘‘ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီး ပြောပြီးထိုးလို့ရ တယ်။ သူတို့(နိုင်ငံခြားသား)ပတ် စပို့စာအုပ်မှာက လူမျိုး၊ ဘာသာ မှမပါတာ။ ဥပမာ ဟိုဘက်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ် တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုပြီး ထိုးလိုက်ရတယ်။ တရား သူကြီးလည်း သူ့ကိုမမေးဘူး။ ကောင်မလေးကိုပဲ အဓိကမေး မှာ။ သူဘာပဲပြောပြော ခေါင်းပဲ ညိတ်လိုက်။ အဲဒီတစ်လုံးပဲ။ လက်မှတ်ထိုး။ ကျန်တာအကုန် လုံးကကောင်မလေးပဲ မေးမှာ’’ ဟု မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းနှင့် ဘဏ်လမ်းအနီးတွင် နိုတြီလုပ် ငန်းလုပ်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦးက ပြောသည်။
နိုတြီလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူများအထူးသတိထားသည့် အချက်တစ်ချက်ရှိသည်။ ယင်း မှာ မြန်မာအမျိုးသမီးများသည် ကျန်နိုင်ငံသားများထက် တရုတ် နိုင်ငံသားများနှင့်လက်ထပ်မည့် ဖြစ်စဉ်များကို သတိထားခြင်းဖြစ် သည်။ အခြားနိုင်ငံသားများနှင့် ဆိုပါက နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ မဖြေရှင်းရဘဲ တရုတ်နိုင်ငံသား များနှင့်ဆက်စပ်သော လက်ထပ် ထိမ်းမြားမှုများတွင် လူကုန်ကူးခံ ရသည့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ အချို့ဖြစ်ပွား၍ လိုက်လံဖြေရှင်း ပေးရဖူးသည်ဟု ပြောသည်။
‘‘ဒီမှာတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဟိုရောက်ရင် ဖောက်ပြီ။ ၁၀ ယောက်မှာ ငါးယောက်လောက် ဖောက်တယ်’’ ဟု တရုတ်နိုင်ငံ သားများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန် ဆောင်မှုပေးခဲ့သည့် အတွေ့အ ကြုံကို နိုတြီလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင် ပေးသူ တစ်ဦးကပြောသည်။
7Day ကရရှိထားသော စာ ရင်းအရ ခရိုင်တရားရုံးများတွင် ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီမှ သြဂုတ်အထိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီး နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံခြားသား လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုလေးရာခန့် ရှိပြီး သုံးရာခန့်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ သားနှင့် လက်ထပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တရားရုံးတွင် လက်ထပ်ပြီးမှ လူ ကုန်ကူးခံရမှုအချို့အပါအဝင် တရုတ်မယားအဖြစ် လူကုန်ကူးခံရမှု ၂၀၁၈ အတွင်း အမှုပေါင်း ၁၃၀ ခန့်ရှိခဲ့သည်ဟု လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ့်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာအမျိုး သမီးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံခြား သား လက်ထပ်ထိမ်းမြားကျမ်း ကျိန်မှုကို အများဆုံးပြုလုပ်ပေးနေ သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် နိုတြီလုပ် ငန်းလုပ်သူများက ပြောသော မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးသို့ 7Day News Journal က စာပို့ မေးမြန်းရာ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ် နည်းများနှင့်အညီ ညွှန်ကြားချက် အတိုင်းတိတိကျကျလုပ်ဆောင် ပေးနေကြောင်း မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံး၊ ခရိုင်တရားသူကြီး ဦး ခင်မောင်မောင်က စာဖြင့်ဖြေ ကြားသည်။ ထိုသို့ တရားဝင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကို ခရိုင် တရားရုံးများက ဆောင်ရွက်ပေးရ ခြင်းမှာ မြန်မာအမျိုးသမီးများရ ထိုက်သည့် အခွင့်အရေးများနစ် နာဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်ဆက် တွဲပြဿနာများဆိုသည်မှာ ထိမ်း မြားလက်ထပ်သူနှစ်ဦးအကြား တွင်သာ ဖြစ်ပွားသည့် ကိစ္စရပ် သာဖြစ်သည်ဟု အကြောင်းပြန် သည်။ ထိုသို့တရားဝင်လက်ထပ် ထိမ်းမြားသူတိုင်း နောက် ဆက်တွဲပြဿနာများကြုံတွေ့ခဲ့ ခြင်းမဟုတ်ဘဲတရားဝင်အကြင် လင်မယားအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိပြီး ဖြစ်၍ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နောက် ဆက်တွဲ ပြဿနာများကို ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီး များအ နေဖြင့် ဥပဒေနှင့် အညီဖြေရှင်းနိုင် သည့် အခွင့်အရေးရရှိထားပြီးဖြစ် သည်ဟု ဦးခင်မောင်မောင်ကဖြေ သည်။
လူကုန်ကူးခံရသူများအရေး ဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် ရဲတပ် ဖွဲ့ကမူတရားဝင်လက်ထပ်သွား ပြီးနောက်လူကုန်ကူးခံရသောမြန် မာအမျိုးသမီးများသည် ဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ကို လုံလောက်စွာ မရကြောင်း ဝေဖန်မှုများရှိသည်။
အထက်ပါအမှုမျိုး အနည်းငယ်သာရှိသေးသော်လည်း ခေတ်သစ်လူကုန်ကူးသည့်ပုံစံဖြင့် ခေတ်စားလာမည်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် လူကုန်ကူးခံရသူများအရေးဆောင်ရွက်နေသူများက စိုးရိမ်နေသည်။
ဖြေရှင်းရန်ခက်နေသော အိမ်နီး ချင်းနိုင်ငံနှင့် လူကုန်ကူးပြဿနာ
ယခုမကျင့်သုံးတော့သော် လည်း ယခင်က ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကကျင့်သုံးခဲ့သော တစ်အိမ် ထောင်ကလေးတစ်ယောက် မူ ဝါဒကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ၌ အမျိုး သားဦးရေသည် အမျိုးသမီးဦးရေ ထက် ၃၄ သန်းခန့် ပိုများနေပြီး မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီး ယားနှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့ကဲ့ သို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ သတို့ သမီးများကို မှောင်ခိုကူးမှုဖြစ်ပေါ် လာစေကြောင်း Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health က အစီရင်ခံစာတစ်စောင် မကြာမီက ထုတ်ပြန်သတိ ပေးထားသည်။
မြန်မာတွင် ရင်ဆိုင်နေရ သည့် လူကုန်ကူးမှုနှင့် လူမှောင်ခို ပြဿနာသည် ကျန်နိုင်ငံများ ထက် ဖြေရှင်းရခက်နေသည်။ အိမ်နီးချင်းထိုင်းတွင်လည်း မြန် မာအမျိုးသမီးများ လူကုန်ကူးခံရ မှုရှိသည့်တိုင် ထိုင်းအစိုးရက ဥပ ဒေဖြင့် ထိန်းချုပ်ထား၍ လူကုန် ကူးမှု ရာခိုင်နှုန်း သိသိသာသာ နည်းပါးသည်ဟု ဒုတိယရဲမှူးကြီး ခင်မောင်လှ (ငြိမ်း) က ပြော သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင် လက်ထပ်သွားသည့် အမျိုးသမီး များအတွက် အာမခံချက်ရှိသော အခွင့်အရေးကို ဥပဒေအရ ရရှိ ရေးအတွက် တရုတ်- မြန်မာအ စည်းအဝေးများတွင် တောင်းဆို ဆွေးနွေးသော်လည်း အဆင်မပြေဟု လူကုန်ကူးခံရသူများအ ရေး ဆောင်ရွက်သူများက ဆို သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ အစိုးရသည် ၎င်းတို့နိုင်ငံသားများ၏ အမျိုးသ မီးလိုအပ်ချက် ပြဿနာကိုဖြေ ရှင်းရန် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ် သော ဗီယက်နမ်၊ ကိုရီးယားတို့ နှင့် တရားဝင်လက်ထက်ထိမ်းမြား ခွင့်ကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေပြီဖြစ် သည်။ ယင်းအခြေအနေတွင် မြန်မာအမျိုးသမီးအချို့သည် တရုတ်ယွမ်ငွေသောင်းဂဏန်း ပမာဏဖြင့် လက်ထပ်ဟန်ပြ၍ လူကုန်ကူးခံနေရခြင်းဖြစ်သည်။
ကံကောင်းထောက်မ၍လူ ကုန်ကူးမခံရဘဲ သားမှတ်မှတ် မယားမှတ်မှတ် ပေါင်းသင်းခံရ သော မြန်မာအမျိုးသမီးများ ရှိ သော်လည်း ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ထက်ဝက်ခန့်သည် လူကုန်ကူးခံရ မှုနှင့် ဆက်စပ်သော နောက်ဆက် တွဲပြဿနာများ ကြုံတွေ့ကြရ သည်ဟု ဒုတိယရဲမှူးကြီး ညွန့် လှိုင် (ငြိမ်း) ရေးသားသည့် လူ ကုန်ကူးမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဥပဒေရေးရာသုံးသပ်ချက်များ စာ အုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Johns Hopkins Boom-berg School of Public Health ၏ အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာအမျိုးသမီး ၇,၅၀၀ ခန့်သည်တရုတ်နိုင်ငံ တွင် အတင်းအကျပ် ကလေးမွေးခိုင်းခြင်းခံရပြီး ၎င်းတို့၏လင် ယောက်ျားများက မည်သို့ပင်ပြုမူ ဆက်ဆံနေစေကာမူ ၎င်းတို့အိမ် ထောင်ရေးကို မပစ်ပယ်နိုင်ကြဘဲ ဒုက္ခကို ခါးစည်းခံနေကြသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အချို့အမျိုးသမီးများသည် ကလေးမွေးရန် အသုံးချခံရပြီး ကလေးမွေးပြီး နောက် နှင်လွှတ်ခံရကြောင်း Johns Hopkins Boomberg School of Public Health ၏ တွဲဖက်ပါမောက္ခကောက်သ်လန်း ရော်ဘင်ဆင်က ထုတ်ဖော်ပြော ကြားခဲ့သည်။ အထက်ပါစစ်တမ်း ကို ကာက်သ်လန်းရော်ဘင်ဆင် က ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
မြန်မာအစိုးရ အနေဖြင့် ကိုယ့်နိုင်ငံသားများအတွက် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်ရ စေရန်နှင့် ခရီးသွားလာခွင့်ရစေ ရန် သက်သေခံစာရွက်စာတမ်း များ ထုတ်ပေးခြင်းအပါအဝင် ၎င်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးမည့် မူဝါ ဒများ ဖော်ဆောင်ရမည်ဟုလည်း ရော်ဘင်ဆင်က အကြံပြုထားသည်။
Yangon Journalism School, A Global Development & Education Organization (IREX) နှင့် Navigator တို့က ရန်ကုန်မြို့တွင် အောက်တိုဘာအတွင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် လူကုန်ကူးမှုအကြောင်း သတင်းရေးသားနည်းသင်တန်းတွင် ပြည်တွင်းသတင်း စာသုံးစောင်၊ ဂျာနယ်နှစ်စောင်အား တစ်လကြာစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီး စစ်တမ်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်ငါးစောင်တွင် တစ်လအတွင်း ရေးသားသမျှ သတင်းဆောင်းပါးများအနက် လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ သတင်းနှင့် ဆောင်းပါးမည်မျှရေးသားသည်ကို စနစ်တကျ စစ်တမ်းပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်တမ်း၏ ရလဒ်က အံ့ဩလောက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၇ နိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူးခံရမှု အများဆုံး နိုင်ငံများအနက် နံပါတ်(၁၈)ချိတ်ပြီး လူကုန်ကူးခံရမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ပြဿနာများ ထူပြောနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်ငါးစောင်က တစ်လအတွင်း သတင်း စုစုပေါင်း ၂,၉၅၅ ပုဒ် ရေးသားဖော်ပြရာ လူကုန်ကူးခံရမှုနှင့်ဆိုင်သောသတင်း ၁၃ ပုဒ်သာ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၀ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၈ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်က ထုတ်ပြန်သည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၇ နိုင်ငံအပေါ် သုံးသပ်ထား သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံ စာအရ မြန်မာနိုင်ငံသည်လူကုန် ကူးခံရမှုအများဆုံးနိုင်ငံများစာ ရင်းတွင် နံပါတ်(၁၈)၌ ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ ၅၂ သန်း ကျော်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှ သည့် လူဦးရေ ၅၇၅,၀၀၀ ခန့် သည် ခေတ်သစ်ကျေးကျွန်စနစ် အောက်တွင် နေထိုင်နေကြရ သည်ဟု ဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီ ဗန်ထီးယူက ထုတ်ဖော်ပြောကြား ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အခြား ဖွံ့ဖြိုးဆဲကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကဲ့သို့ အ လုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါး မှု၊ ဝင်ငွေနည်းပါးမှု၊ သဘာ၀ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှု၊ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများဖြစ် ပွားမှုစသည့်ဘဝရပ်တည်ရန်ခက် ခဲစေသောအကြောင်းရင်းများ ကြောင့် လူကုန်ကူးမှုများဆက် လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်သလို ပြည်ပတွင် ခိုအောင်းနေသော လူ ကုန်ကူးသူများကို ဖမ်းဆီးရန်ခက် ခဲခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံသို့ ရောက်နေ သောလူကုန်ကူးခံရသူများကို အ ချိန်မီကယ်တင်နိုင်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ နေရပ်ပြန်ရောက်လာသည့် လူ ကုန်ကူးခံရသူများအတွက် ခိုင်မာ သည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အ လမ်းများ တည်ဆောက်ပေးရန် လိုအပ်နေခြင်းစသည့်စိန်ခေါ်မှု များနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရ ကြောင်း ဒုတိယသမ္မတကဝန်ခံ ခဲ့သည်။
အစိုးရက တရားဝင်ထုတ် ပြန်သည့်စာရင်းများတွင် ၂၀၁၇ အတွင်း လူကုန်ကူးမှုမျိုးစုံအနက် တရုတ်နိုင်ငံသို့ နည်းမျိုးစုံဖြင့် လူ ကုန်ကူးမှုသည် ၇၄ ဒသမ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေပြီး အမျိုးသ မီးအများစုသည် အဓမ္မထိမ်းမြား လက်ထပ်ရန် လူကုန်ကူးခံနေရ သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ လူ ကုန်ကူးခံရမှု ဖြစ်စဉ်များတွင် အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေခြင်း၊ အဓမ္မ ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ အဓမ္မ မွေးစားခြင်းနှင့် ကြွေးမြီဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခိုင်းစေခြင်းဆိုသည့် ပုံစံ ငါးမျိုးဖြစ်ပွားနေသည်။ ၂၀၁၇ ကိန်းဂဏန်းများအရ အဓမ္မထိမ်း မြားလက်ထပ်မှု ၆၀ ဒသမ ၁ ရာ ခိုင်နှုန်း၊ အဓမ္မပြည့်ဆန်ဆာပြုမှု ၁၇ ဒသမ ၂ ရခိုင်နှုန်း၊ အဓမ္မအလုပ် ခိုင်းစေမှု ၂၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကလေးသူငယ် လူကုန်ကူးမှု ၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကြွေးမြီဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခိုင်းစေမှု ၁ ဒသမ ၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဆို သည်။
လူကုန်ကူးခံရသူများ ကြုံတွေ့နေရသည့် ဒုက္ခများမှ ဆွဲထုတ်ကယ်တင်နိုင်ရန်၊ လူကုန်ကူးခံရသူများ ရင်ဖွင့်လိုသော သတင်းစကားများကို လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရထံ ကြိုးစားပု့ိဆောင်ပေးရန် ယနေ့ခေတ် သတင်းထောက်များက ကြိုးစားဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း Yangon Journalism School အား ဦးဆောင်နေသူ သတင်းစာဆရာ ဦးရဲနိုင်မိုးက တိုက်တွန်းသည်။
‘‘လူကုန်ကူးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေက ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မှာ ဆက်တိုက်ကို ရေးနေရမှာ’’ ဟု ဦးရဲနိုင်မိုးက တိုက်တွန်းသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ ၅၂ သန်းကျော်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသည့် လူဦးရေ ၅၇၅,၀၀၀ ခန့်သည် လူကုန်ကူးမှုနှင့် ဆက် စပ်၍ အန္တရာယ်ဇုန်အတွင်းကျ ရောက်နေပြီး သတိပြုရန်လို ကြောင်း အစိုးရကပြောကြားထား သော်လည်း လူကုန်ကူးမှုတားဆီး နှိမ်နင်းရေး ရှေ့တန်းမှကြိုးပမ်း နေသော ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားအ လွန်နည်းပါးနေသည်။ လူကုန်ကူး မှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့၌ တပ်ဖွဲ့ခွဲသုံးခု၊ တပ်ဖွဲ့စု ၂၀ ရှိပြီး မြေပြင်တွင်ရှိသည့် တပ်ဖွဲ့စုတစ် စုချင်း၌ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင် ၃၆ ဦးရှိ ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ၁၀ ဦးမှ ၁၅ ခန့်သာရှိသည်။ လူ ကုန်ကူးမှု အများဆုံးဖြစ်နေသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာပင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၇ ဦးသာရှိနေသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးရေ ၁,၀၂၉ ဦးရှိရမည်ဖြစ်သော်လည်း ယခု နောက်ဆုံးစာရင်းအရ ၄၂၆ ဦး သာရှိနေသည်။
အခြားပြဿနာများမှာ လူ ကုန်ကူးခံရသူများ ကိုယ်တိုင် တရားခံ၏ မက်လုံးပေးဆွဲဆောင် မှုနောက်သို့လိုက်သွားပြီး အမှုမ ဖွင့်လိုခြင်းနှင့် အမှုကို ခိုင်မာစွာ တည်ဆောက်နိုင်ရန် လိုအပ် သော သက်သေအထောက်အ ထားများပေးအပ်ရန် ငြင်းဆန် ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လူကုန် ကူးမှုသည် သေဒဏ်အထိ ပြစ် ဒဏ်သတ်မှတ်ထား၍ အမှုရင် ဆိုင်နေရဆဲ တရားခံများကပြစ် ဒဏ်ပေ့ါလျော့ရေးနည်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးစားလေ့ရှိသည်။
တည်ဆဲဥပဒေအရလည်း လူကုန်ကူးမှုတားဆီးရေးရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များသည် မူးယစ်ဆေးဝါးတား ဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကဲ့သို့ သံ သရှိတရားခံကို ကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီး ခွင့်မရှိပေ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း လေးဆယ်ကျော် (၁၉၇၄) က ထုတ်ခဲ့သော မူးယစ်ဆေးဝါးဥပ ဒေတွင် မူးယစ်ဆးဝါးတားဆီးနှိမ် နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဝရမ်းထုတ် ခွင့်ပေးထားသော်လည်း မူးယစ် တိုက်ဖျက်ရေးကဲ့သို့ပင် အမျိုး သားရေးတာဝန်တစ်ရပ်ဟု ခေါင်း စဉ်တပ်ထားသော လူကုန်ကူး တိုက်ဖျက်ရေးတွင် ယနေ့အထိ ယင်းအခွင့်အရေးမရှိသေးပေ။ ၂၀၀၅ က ထုတ်ပြန်သော လူကုန် ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ ကို ယခုအခါဖြည့်စွက်ပြင်ဆင် နေပြီး အသစ်ဖြစ်လာမည့်ဥပဒေ တွင် လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်း ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုယ်တိုင်သံသယရှိ သော လူပုဂ္ဂိုလ် (သို့မဟုတ်) နေ အိမ်ကိုဝင်ရောက် ရှာဖွေရန်ဝရမ်း ထုတ်ရှာဖွေခွင့်ကို ဖြည့်စွက်ရေး ဆွဲရန်ကြိုးစားနေသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့အပြင် ဝန်ကြီးဌာန များနှင့် အသင်းအဖွဲ့များပါဝင် သော လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာ ကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကိုလည်း ဖွဲ့ စည်းထားပြီး ဗဟိုတွင်ပါဝင် သောဌာနဆိုင်ရာအားလုံး အား တက်သရော ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု လူကုန်ကူးခံရ သူများအရေးဆောင်ရွက်နေသူ များကသုံးသပ်သည်။
‘‘ကျွန်တော်တို့ တစ်ဖွဲ့တည်း လုပ်လို့မရဘူး။ အကုန်လုံးပါဝင် ရမယ်။ တရားဝင်သတ်မှတ်ပေး ထားတဲ့ အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်က ငြိမ်နေတော့ နည်းနည်းတော့ခက် တယ်’’ ဟု လူကုန်ကူးမှု တားဆီး နှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောသည်။